China Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, voaroy, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary orinasa mpamokatra | Hanketo
Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary tsipika famokarana
Ny Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary tsipika famokarana dia afaka mamokatra ranom-boankazo, ranom-boasary, mifantoka amin'ny ranom-boankazo, vovo-boankazo, voankazo ary vokatra hafa.
Ny Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary tsipika famokarana dia afaka mamokatra ranom-boankazo, ranom-boasary, mifantoka amin'ny ranom-boankazo, vovoka voankazo, jamam-boankazo ary vokatra hafa. , masinina fanamarinana, ranomandry kitapo rivotra, tanky enzymolysis, decanter, ultrafilter, homogenizer, milina degassing, milina sterilization, masinina famenoana, masinina mahazatra sy kojakoja hafa. Ity tsipika famokarana ity dia natao miaraka amina hevitra mandroso sy avo lenta amin'ny automatisation; Ny fitaovana lehibe indrindra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana amin'ny fikarakarana sakafo.
Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary fonosana famokarana: tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika PET, fantsom-bokotra ambony, fonosana malefaka aseptika, baoritra biriky, baoritra ambony azo zahana, kitapo aseptika 2L-220L ao amponga, fonosana baoritra, kitapo plastika, lata tin-70-4500g.
Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary asa tanana:
Misafidiana akora vaovao sy matotra ary kobanina amin'ny rano in-droa.
Voankazo kilasy voalohany: voa mena maitso ≤ 5%, voankazo lo ≤ 5%, fampidirana 3%;
Voankazo kilasy faharoa: voa mena maitso ≤ 6%, voankazo lo ≤ 8%, fampidirana ≤ 5%.
Fanondroana ara-batana sy simika: atiny siramamy ≥ 0,04g / ml, asidra total ≥ 25g / kg, asidra miovaova ≤ 3 × 10-4g / ml.
Fanadiovana: alohan'ny hanamasinana ny ranom-boankazo dia tokony diovina tsara ny ranona ary esorina ireo faritra lo sy bobongolo. Satria matetika voapetaka amin'ny hoditra ireo akora manta, raha tsy diovina dia entina ao anaty ranom-boasary ny vovoka sy ny loto ary hisy fiatraikany amin'ny kalitao. Ny tahan'ny fivezivezin'ny optika dia 20L / min-23l / min, ary ny elanelana misy eo amin'ny noza sy ny voankazo dia 17cm-18cm.
Ilaina ny manorotoro ny ranom-boankazo alohan'ny manapotsitra mba hamoronana ilay dingana fanosehana sy fanerena hanatsarana ny vokatra azo avy amin'ny akora.
Ny ranom-boankazo dia esorina amin'ny tsindry mekanika ivelany. Araka ny fepetra takiana amin'ny teknolojia enzimantazy energinezika sy ny ranom-boankazo dia namboarina ny famolavolana sy ny fisafidianana ny fitaovana fitrandrahana ny ranom-boankazo sy ny rafitra fisarahana; ary fitahirizana mangatsiaka no natsangana mba hanitarana ny vanim-potoanan'ny ranom-boankazo voaroy maniry avy amin'ny 30 andro izay mifanaraka amin'ny fotoam-piotazana (ny vanim-potoanan'ny fisafidianana dia Jolay sy Aogositra isan-taona), ary 45-60 andro fiasana, izay nanatsara ny tahan'ny fampiasana fitaovana ary tombony ara-toekarena amin'ity tsipika famokarana ranom-boankazo ity.
Esory ireo sombin-javatra maditra na sombina miantona miparitaka ao anaty ranom-boankazo. Ny haben'ny lavaka sivana dia manodidina ny 0,5mm.
Ny pectin voarakitra ao anaty ranom-boankazo dia hahatonga ny ranom-boaloboka ho turbid, ho fanampin'izany dia afaka miaro akora hafa izy ary manakana ny fanazavan'ilay ranom-boankazo. Ny pectinase dia ampiasaina amin'ny hydrolyze ny pectin amin'ny ranom-boankazo, ka ny zavatra hafa ao amin'ny ranom-boankazo very ny fiarovana ny pectin ary miara-mivoaka mba hahatratra ny tanjon'ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny, ny fatra amin'ny fanomanana anzima dia 0,2% - 0,4% amin'ny kalitaon'ny ranom-boankazo, ary ny hafanana dia fehezina amin'ny 50 ℃ mandritra ny 3-4 ora.
Fiarovana ny lokony, tsy fanidiana ny anzima ary fanamorana
Ny voankazo manga manga dia manan-karena singa antioxidant VC, VE ary β - carotene. Ho fanampin'izany, dia misy anthocyanins voajanahary tsy voavaha rano koa, izay misy fiatraikany tsara tokoa amin'ny areti-maso ophthalmic maro. Noho izany dia ilaina ny fampiasana ny fiarovana ny lokony sy ny teknolojia tsy fampiasan'ny anzima mba hampitombo ny fitanana ireo akora mavitrika amin'ny fizotran'ny fanodinana. Ny sterilization dia ny famonoana zavamiaina bitika mba hisorohana ny fanimbana, ny iray hafa dia ny tsy fampidinana ny hetsika anzima mba hisorohana ny fisian'ny fiovana ratsy isan-karazany. Sterilization ho an'ny hafanana avo lenta no nampiasaina.
Amin'izany fomba izany dia azo hafoina ny fotoana ifantohana ary azo tazomina ny lokony sy ny tsiron'ny ranom-boankazo. Aorian'ny fifantohana, ny sasany amin'izy ireo dia tehirizina sy amidy ho ranom-boankazo, ary ny sasany kosa dia atao zava-pisotro mahavelona.
Previous: Mango, mananasy, papay, milina fanodinana zanava ary tsipika famokarana
Manaraka: Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana
Voasarimakirana na boasary, voasarimakirana, fizarana voasarimakirana ...
Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, plum pro ...
Apple, poara, voaloboka, ampongabendanitra fikirakirana mach ...